Ihe Ntuzo Nzuzo nke Ahịa Email na Ndị Na-enye Ọrụ Internetntanetị | Martech Zone
Enwere ihe nzuzo ruru unyi na ụlọ ọrụ Email. Ọ bụ enyí nọ n’ime ụlọ ahụ, ọ dịghị onye na-ekwu okwu banyere ya. Ọnweghị onye ọ bụla nwere ike kwuo maka ya maka ụjọ ịkwụ ụgwọ site n'aka ndị ahụ kwesiri ka ha na-emechi igbe ozi anyị.
SPAM Ọ DINGGHTH IHE IJI IWU
Nke ahụ dị mma. Nụrụ ya ebe a. Aga m emeghachi ya…
Otu ugboro ọzọ…
Ma Doug… ihe ị na-ekwu? Nke ahụ jọgburu onwe ya! Nke ahụ megidere ihe ụlọ ọrụ dum na-agwa anyị. Ọ na-agbagha ihe ISPs gwa anyi. Ọ na-agbagha ihe ESP gwa anyi. Ọbụna ọ megidere ihe anyị maara banyere SPAM.
Eziokwu bụ na SPAM bụ ọ bụghị ozi ị na-achọghị SPAM bụ ọ bụghị zigara email na-enweghị ikike. Kedu ihe SPAM is is achọghị ozi-e. AHWANGHED.
Taa, enwere m ike ịdebanye aha maka email sitere na isi iyi a ma ama, nke a na-akpọ GOODMSG. M na-enye ha nke m ikike iziga m ozi ịntanetị oge ọ bụla ha chọrọ, ọbụnadị ịhapụ ha ka ha bipụta ya nke ọma, izitere m onyinye maka ụlọ ọrụ ha 'na-azụ ahịa'.
GOODMSG na-enye adreesị ụlọ ọrụ ha na email ọ bụla.
GOODMSG nwere nzaghachi nzaghachi nke na-akpaghị aka wepu aha ndị achọghị.
GOODMSG gosiputara njikọ wepu aha.
GOODMSG na-eme ka nchọgharị DNS gagharị.
A na-etinye GOODMSG n'ọrụ na onye na-eweta ọrụ ịntanetị ọ bụla (nke ahụ na-enye).
GOODMSG depụtara ndị na-ahụ maka nnyepụta iji debe nkwukọrịta na ndị ISP.
Mgbe m nwetara 6 ọnwa nke email, ana m apị bọtịnụ Junk Email nke ISP m mgbe GOODMSG na-eziga ngwụrọ ngwụrọ. Ndị ọzọ debanyere aha na-eme otu ihe ahụ.
GOODMSG, onye mgbasa ozi a ma ama, ghọrọ onye na-ekwu okwu ụgha. Ikike dabere, mmadụ abụọ optin, CAN-SPAM Dabara, 1-pịa wepu aha na ha… ha mere ihe niile ziri ezi, mana ugbu a, ha bụ SPAMMER.
Dika SPAMMER, edeputara ha. Adreesị IP ha ugbu a na-egbochi. Ndị ahịa ha ndị ọzọ bụ ndị chọrọ email agaghị enweta ya. Aha ha emebiwo. Ikekwe ha na-agbanye na ESP ọhụrụ. Ikekwe ha gbanwee gaa na adreesị IP ọhụrụ. Ha kwesiri ime ihe, ebe email ha apughi ime ya na Igbe mbata. Ikekwe ha anaghịzi azụ ahịa. Mpụ ha? Ozi na-esighi ike, NA-EBUGHED.
Nye ka ụta dịrị maka nke a? GODKWUO? Onye debanyere aha?
Onye ga-ata ụta bụ onye na-eweta ọrụ ịntanetị, ọkachasị, isi ihe na-eweta ozi ISP - Yahoo!, Google, Live (Hotmail, MSN), AOL. Ha na-ata ụta n'ihi na ha enweghị ike ichebe anyị pụọ na ezigbo SPAM. Ha na-eji sistemụ enweghị aha ọma, ha anaghị ekerịta data, ha anaghị enye ngwaọrụ maka ụzọ ama ama ka ha bụrụ ezigbo ndị na-elekọta ụlọ. Kama nke ahụ, ha na-eleghara ọtụtụ ijeri ozi ịntanetị nke ezigbo ndị SPAMMERS zigara bụ ndị na-agbasoghị iwu, achọghị ịma banyere aha, achọghị ịma banyere ikike, megharịa Adreesị IP ha ma gafee nyocha na nguzozi nke ndị ahịa a ma ama na-eji.
Ọ dị ọtụtụ ka ihe na-egosi ọgwụ ọjọọ na High School. Naanị ndị na-enweghị ọgwụ ọjọọ bụ ndị na-adịghịrị ọgwụ ọjọọ. Ndị na-ere ọgwụ ọjọọ ka na-agagharị n'okporo ụzọ na paseeji, na-achị ọchị na ihe ịrịba ama ka ha na-agafe ha.
Ekwuru m banyere ikike na mbụ. Nsogbu dị na ikike bụ na enweghị sistemụ dịịrị ndị ISP iji hụ na ị nyere ikike. ESP chọrọ ikike dị ka nkwụsị-ọdịiche megide n'ihe ize ndụ nke napụta ogbenye na izipu ozi email junk. Agbanyeghị, ISP na ESP DVERGH share ịkekọrịta usoro nke ikike.
Mmadụ kwesịrị ịmalite ịjụ ihe kpatara ya. Onye ọ bụla kwesịrị ịza ọtụtụ ijeri ozi SPAM nke na-agafe ozugbo ebe ozi ịntanetị 'dị mma' enweghị ike ịgafe na azụmaahịa na-ata ahụhụ. Ndị ISP na-aga n'ihu banyere ikike, ikike, ikike. Ha achọghị ịma banyere ikike… naanị ha na-eche maka ọtụtụ mmadụ pịa bọtịnụ junk email ahụ. Nke ahụ bụ ihe ha nwere iji rụọ ọrụ. Dịka onye na-ere ahịa, wepụta ozi email nke ndị debanyere aha gị, ma lezie anya! A ga-egbochi gị ma kpọọ gị SPAMMER n'oge na-adịghị anya.
Ihe ndị ISP kwesịrị ime iji lụso ezigbo SPAM ọgụ
Nye Ndenye Opt-In API maka onye na-eweta ọrụ Email ma ọ bụ Mgbasa ozi ọ bụla chọrọ iji ozi ezipụ ozi.
Ekekọrịta data ịbanye na ISP ndị ọzọ iji hụ na anaghị ata ndị ahịa azụmaahịa.
Kwụsị ndị SPAMMERS site na iji ISP iji zipu email! You maara na United States bụ ihe kasị njọ SPAMMER? Are na-agwa m n'ezie na anyị nwere ike ịchọta nwatakịrị na-akpali agụụ mmekọahụ na awa mana ndị SPAMMERS nwere ike ịrụ ọrụ ruo ọtụtụ afọ? You're na-agwa m na nlekota ngwaike enweghị ike ịhụ ma kwụsị ụda ahịa a dị egwu?
Ọ bụrụ na m kwere ka ndị mmadụ na-ebu ọgwụ ọjọọ n'ụgbọala m, m ga-anọ n'ụlọ nga. Kedu ka esi eme ka ndị ISP ndị na-ebufe SPAM ghara ịza ajụjụ?
Inye ụzọ maka ozi-e ka ọ bụrụ nke ekwe nkwa iji bata na Igbe mbata. Email abụghịzi ụzọ nkwukọrịta nke abụọ. Ana m enweta ihe edetu kredit na ihe gbasara ụlọ akụ na igbe mbata m. Ọ bụ ihe a na-apụghị ịkọwapụta na ozi ịntanetị ndị a ga-abanye na folda Junk Email.
Ọ bụrụ na gbasie, FedEx na USPS kwụsịrị igosi ụlọ nkwakọba ihe gị iji zipu ngwaahịa gị, ị ga-agba akwụkwọ ha. Otu onye ga-agba akwụkwọ na ISP n'oge na-adịghị anya maka ịnyefe email nke dabere na ikike ma soro usoro ọ bụla. Companieslọ ọrụ ndị a kwesịrị ịza ajụjụ maka ọgbaghara a ha kpọbatara anyị ma jụ ịpụ anyị.
Tags: nnapụtaozi nnapụta emailespispemail njakịrịjunk email nzachaspam
Nov 9, 2007 na 3:12 AM
Akwa post Douglas. Gbasaa ozi ahụ!
Nov 9, 2007 na 9:02 AM
Kwetara. Ofdị dịka ozi-e ndị ahụ na-arụ ọrụ na-abịa n'ụzọ m. Argghhh!
Nov 9, 2007 na 1:39 PM
Nke a na echetara m otu edemede si n'aka Silverpop CEO banyere etu "ikike" kwesiri iji "atụmanya" dochie ya.
Nov 11, 2007 na 5:43 AM
Ezi post, agbanyeghị na echere m na isi okwu gị # 4 na-eduga n'okporo ụzọ na-amị amị. Ọ bụrụ na ISPS ga-akwụ ụgwọ maka ihe ndị ahịa ha zigara, ha ga-abụ ndị na-eme mgbanwe maka ndị ahịa ha.
Ma ọ bụ, n’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ị nweghị ike ịta ụta Postal Service maka bọmbụ mail. Ọ ga - amasị gị ka Dell nọrọ n’ụlọ mkpọrọ mgbe hacker na - eji laptọọpụ ha waba n’ụlọ akụ? Kwesịrị ịdọrọ AT&T maka mpụ na-ahazi site na ekwentị? Ọ bụghị nke ọma. Onye na ebu ya ekwesịghị ịbụ maka ihe eburu. Onye ziri ozi bụ.
Cheedị ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ achụmnta ego nwere ike ịgba ụgwọ ndị spammara ama maka arụpụtaghị ihe. Iji ikike, ike (na: mmanye) iwu, Spam kwesịrị ịbụ ihe gara aga.
Nov 11, 2007 na 9:14 AM
Nke ahụ bụ ihe magburu onwe ya, modifoo. Ọ ga-abụrịrị ihe ebe ebumnuche ga-egosi. Ọ bụrụ na ISP maara ha na-ere bandwidth maka iji spamming, ha kwesiri ịza ajụjụ.
Àgwà dị ka nke ekwuputara na blọọgụ a bụ kpọmkwem ihe kpatara ISP ndị uwe ojii e-mail ahịa: ndị na-ezipụ akwụkwọ ozi a na-edeghị akwụkwọ na-eme ka anyaukwu ha kpuo ìsì ka ha kwenye na ha anaghị eme ihe ọjọọ. Enwere m ozi maka gị, moron: nkọwa nke spam nwere ihe ọ bụla * iji ikike. Ndị dị ka gị agaghị aghọta nke ahụ, agbanyeghị, nke kpatara na ndị ISP na-enwe ọ happyụ nke ukwuu igbochi gị ma hapụ gị ka ị na-afụ ụfụ maka ime nke ọma ruo mgbe ehi ga-alọta.
Rachel, ọ ga-abụrịrị na ị mafere akwụkwọ niile. Ewezuga akụkụ moron, ihe m kwuru bụ ihe ị na-ewe iwe. Biko wepụta oge gụọ isiokwu ENTIRE.
Mee 22, 2016 na 3: 25 AM
Akwa ederede. Ugbu a ihe dị ka afọ 9 mgbe nke ahụ gasịrị ọnọdụ ahụ ka njọ. Dị ka m na-ahụ ya ihe anyị na-ahụ bụ nnukwu ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ dị ka Google na-achịkwa ọtụtụ ihe anyị na-eme, kwuo ma ọ bụ chee. Nke a bụ echiche nke wedge maka mmachi na ezubere ya iji kwụsị echiche ezi uche ma mee ka anyị loda propoganda niile na ụgha na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ụwa chọrọ ịzụrụ anyị nri - na-eji "Ọchịchị" Ọchịchị dịka ndị nchịkwa ha. Egwu na-emenye ụjọ ma n'ụzọ dị oke egwu ị na-anụ ka a na-atụle obere ihe banyere nke a. Ndi otutu - aturu ahu na anakwere ya nile ma ruo n’udi ozo ha na - efe Googles nke uwa dika Chineke. N'ezie ọ dịghị ihe ọma ga-esi na nke a. Maka ndị na-ere ahịa email ziri ezi - yana ndị debanyere aha ha n'ihi na ha chọrọ ọdịnaya ha (yabụ bara uru, nke bara uru ma na-enye ike) ọdịnaya dị mma! Azụmahịa gị ga-emebi. Corporatelọ ọrụ ụlọ ọrụ amorphouse zuru ụwa ọnụ a achọghị ka enye gị ike n'ụzọ ọ bụla. Ya mere, ọ bụghị naanị na ị ga-agụ akwụkwọ ozi gị, ọ ga-egbochi ha izipu - ozi aghụghọ na eziokwu nke okwu ahụ.
Ikekwe azụmaahịa ndị dị n'ịntanetị kwesịrị ịchọpụta ozi email ọ bụla a na-enyefeghị wee tinye uru dollar na ya dịka $ 1 kwa email na ego nwatakịrị / uru ọ furu efu wee gbaa akwụkwọ na klas ụwa maka enweghị nnyefe. Nke ahụ nwere ike ime ka ha chee echiche! Yabụ ọ bụrụ na -ekwu 10,000,000 email ziri ezi n'ụwa niile kwa ụbọchị ịsị na ọ ga - agbakwunye?